Guusha Xil. Ahmed-yaasiin uu ku guulaystay ka mid noqoshada Shir-gudddoonka golaha Baaralamanku waa guul u soo hoyatay golaha iyo Somaliland
Wednesday August 30, 2017 - 17:13:18 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Golaha Baaralamka Somaliland iyaga oo saaka wada qoslaya, waxa ay kursiga ku/xigeenka koowaad ee Baaralamanka
u doorteen Xil. Ahmed-yaasin Sh. Ali Ayaanle, oo ah shakhsi mudan in uu xilkaa shir-guddoonka ku soo biiro.
Maalin ka hor ayey ahayd, markii hoggaanka xisbiga Waddani ay soo af-meereen khilaafkii u dhexeeyey Xil.Baashe ( Guddoomiyaha Baarlamanka ee dhawaan la doortay ) iyo Xil. Talyanle, oo khilaafkoodu kala qaybiyey golaha Baarlamaanka Somaliland. Saakana waxa xigtay guul kale oo ah tani lagu doortay Xil. Ahmed-Yaasin Sh. Ali Ayaanle.
Labada guulood ee is barkaniba, waa guul.... guud ahaan u soo hoyatay Somaliland, waana arrin taariikhda ka gashay baal dahab ah. Haddii aanu heshiiska hore dhicinna guusha Xil. Ahmed-Yaasiin si dhib yar kuma ay timaaddeen.
Laakiin dhinaca kale waxa iyana guulahani ay saamayn weyn ku yeelanayaan xisbiyada tartamaya, gaar ahaan Kulmiye iyo Waddani. Sida maanta iyo shalay afka lagu hayana, waxa jiray orod loogu jiray in shir-guddoonka la kala jiito. Oo Kulmiye iyo Waddani u kala ololeeyaan. Markhtaati ma doonna waxa u ahaa sida Waddani ugu ololaynayey Talyanle ama Kulmiye ugu ololaynayey Baashe. Inkasta oo arrintaasi ay daba fureen Xildhibaanno ka tirsanaa Kulmiye, oo sidaasina ay guushii hore ku raacday xisbiga Waddani.
Markii muranku ka dhashay doorashadii guddoomiyaha, xildhibaannadiina laba u kala jabeen, xisbiga Waddanina uu billaabay dacwad iyo olole uu ku diiddan yahay guddoomiyaha cusub ee loo doortay golaha, ayaa waxa muuqatay in xaalku uu maalin walba is beddelayo, oo hoos u dhac uu ku socday taageerayaashii garabka Waddani. Taainsa ay keentay in hoggaanka xisbigu dib uga fekeraan shaxda godkii ay degi lahaayeen.
Haddii ay halkaa maraysana, waxa ay hoggaanka Waddani si hoose ula xidhiidheen guddoomiye Baashe, oo weliba ay ku guulaysteen in uu yimaaddo guriga Cirro. Isaga oo kelidii ah, ayaanu u yimid hoggaankii Waddani oo u sii tashaday. Baashe in arrinka lagu khayaameeyey iyo in kale shaki ayaa ku jira. Balse waxa aan shaki ku jirin inuu madashii yimid kelidii, oo aanu wax talo ahna la soo yeelan xisbigiisii iyo taageerayaashiisii midnaba.
Guriga uu Baashe soo galay waxa duddada u fadhiya, Gud. Abdiraxman Cirro, Gud. Jirde iyo Hoggaamiye Baashe, waxa isna weheliya Xil. Talyanle. Ugu horreyn waxa Baashe loo sheegay in Cirro xajka tegayo, isla markaana aanu doonayn in uu xajka tago iyada oo uu khilaaf jiro....waana laguu tanaasulayaa...ee bishaaro kkkkk. Gud. Baashena arrintaa aad ayuu u soo dhaweeyey. Kadib, waxa loo yeedhay saxaafadda, warkii loo sheegayna waan ogayn, waxana ugu weynaa oo madaxda xisbiga Waddani iska daba mareen, in khalad dhacay, guusha Baashe la siiyeyna ay khalad ahayd, oo guushaa uu Talyanle lahaa.
Arrintaasi aad ayey uga cadhaysiisay hoggaanka xisbiga Kulmiye, khilaafkaa la dhammeeyeyna may hanbalyeyn, waxana ay si hoose u billaabeen dagaal iyo olole ay u galeen sidii loo soo saari lahaa xil. Ahmed-yaasiin, waxana xisbigii Kulmiye ay hawl geliyeen oday dhaqameedyo ay hor-kacyaan Suldaan Saleebaan, Suldaan Dhawal iyo madax dhaqameed kale. Oo kulammo la yeeshay oday dhaqameedyada beesha Subeer Awal iyo xildhigaannada Kulmiye. Sidoo kale waxa si cad u wada kulmay Gud. Muse Biixi iyo xildhibaannada Kulmiye. Kulankaasina waxba kuma ay soo qaadin Baashe iyo heshiiskii uu la galay hoggaanka Waddani, waxase ay wada galeen ballan cad, oo ay guul ugu raadinayaan xisbiga iyo rabitaankiisa.
Ballantii la kala galay oo ay ka mid ahayd in Xil. Ahmed-Yaasiin Sh. Ali Ayaane la soo saaro, ayaana saaka lagu guulaystay. Sidaasaanu shir guddoonkii golaha Baaralamka Somaliland uu ku Kulmiye kuwada noqday.